Sell-More-Seat (Worldticket) System Training (Part 1) – Htoo Myat Thu
Htoo Myat Thu	in Aviation	 September 24, 2016 July 19, 2017 255 Words
System အတွက် အသုံးပြုရန် မသင့်သည့် Browser များ
ပထမဦးစွာ System စသုံးမည့် Computer တွင် Adobe Flash Player Plug-in ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ Flash Technology ပေါ်အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက် Flash Plug-in လိုအပ်ပါသည်။
Apple Device များတွင် Puffin Browser ဖြင့် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ Apple Device များတွင် Adobe Flash Player Plug-in ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ (Credit: Ko Thiha Kyaw)
Andriod Device များ တွင်သုံးလို့ရပါသည်။ ဒါပေမဲ့ မရရအောင် လုပ်ထားတဲ့အတွက် နဲနဲတော့ကပ်တတ်တတ်ဖြစ်ပါသည်။ OTG တပ်ပြီး Mouse နဲ့သုံးကအဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။ Mobile Version မဟုတ်သည့်အတွက် Screen Size ကြီးသော Tablet, Phone တို့နှင့်ဖြစ်က ပိုကောင်းပါသည်။ Computer မှာမြင်ရသည့်အတိုင်းမြင်ရပါသည်။
မကောင်းသည့်အချက်က Scroll ဆွဲခြင်းမရပါ Scroll Bar ကိုနှိပ်ပြီးသုံးမှရပါသည် ၊ Column များကျဉ်းမြောင်းခြင်းများကိုချဲ့ခြင်းများ မရပါ။ Fare ကြည့်ခြင်း၊ Booking တင်ခြင်း၊ လက်မှတ်ရောင်းခြင်းများကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။ Andriod တွင် အသုံးပြု ရန်လိုအပ်ချက်ကတော့ –
1. Flash Player 11.0 App ကိုအရင်ဒေါင်းပြီး install လုပ်ပေးပါ။ ဒေါင်းရန် Link ။ ထို့နောက်မှ
2. Dolphin Browser App ကိုဒေါင်းပြီး install လုပ်ပေးပါ။ ဒေါင်းရန် link ။
အကယ်လို့ Computer Format ရိုက်လိုက်ခြင်း (သို့) Window အသစ်ပြန်တင်လိုက်ခြင်းကြောင့် Flash Player ပျက်သွားနိုင်ပါသည်။ ပြန်လည် Install လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။
Install လုပ်ပုံကို ဒီ Link မှာနှိပ်ပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ။ ဒေါင်းရန် Link ။
Link 1: Short URL Go to: goo.gl/crwHi4
Link 2: Orginal/Long URL Go to: sms3.worldticket.net/yangon/sms-airline/selma.html ( မှတ်ရခက်ပေမဲ့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။)
Link 3: Go to Yangon Airways official website: www.yangonair.com and click “Agent Login” to enter system. ( မှတ်ရလွယ်ပြီး နှစ်ဆင့်ဝင်ရပါမည်။ Agent များအားလည်း Yangon Airways Website ကြေညာပြီးသွားဖြစ်သွားပါသည်။)
Yangon Airways Official Website ( http://www.yangonair.com)
( Error: အကယ်လို့ဒီ အပေါ်က Link တွေတစ်ခုခုကိုနှိပ်ပြီး အောက်ကပုံလို ဖြစ်နေရင်တော့ Flash Player လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်)
အဆင်ပြေပြေ၀င်ရောက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ပြထားသည့်အတိုင်း Loading လုပ်နေတာမြင်ရမှာပါ။5MB လောက်ရှိတဲ့ Data download လုပ်နေတဲ့အတွက် Internet ကောင်းရင် စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်းကျနိုင်ပါတယ် မကောင်းရင်တော့ 40 Seconds မျှ ကြာနိုင်ပါတယ်။ Flash နည်းပညာဖြစ်တဲ့အတွက် အင်တာနက်ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါမည်။
Loading ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Yangon Airways မှပေးထားသည့်
Username နှင့် Login Password တွေနဲ့ဝင်လို့ရတဲ့ Login Box လေးကျလာပါလိမ့်မည်။ Username ရိုက်ရာတွင် စာလုံးအကုန်လုံး အသေးဖြင့်ရိုက်ပေးပါ ခင်ဗျာ။ Password ရိုက်ရာတွင်လည်း သေချာ ဂရုစိုက်ရိုက်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ Password ရိုက်တဲ့အခါမှာ Myanmar လက်ကွက် Unicode ( သို့ ) Zawgyi Font ဖြစ်မနေစေရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဖြစ်နေပါက Password မှားနေသည်ဟုပြောပါမည်။
Invalid Username / Password ( Password သို့ Username မှားနေပါသည် )
Send Fail ( Internet လိုင်းမကောင်းတဲ့အခါဖြစ်တတ်ပါသည် )
org.hibernation. ( 1 နာရီ သို့2နာရီလောက်စောင့်ပြီးမှ Login ၀င်ရောက်ပါရန်။ System restart လုပ်နေပါသည်)
Cannot reauthenticate in the same session
ကျွန်တော်တို့ YA worldticket system ဖွင့်ထားသည့် Tab တစ်ခု/တစ်ခုထက်မက ကို ပိတ်ပါ
ပြီးမှပြန်ခေါ်ပေးပါ။ ထို့နောက် Login ပြန်ဝင်ကြည့်ပါ။
(တစ်နည်း) YA system ဖွင့်ထားသည့် Tab ကိုပိတ်။ “History Clear” လုပ်ပေးပါ။ ထို့နောက် Login ပြန်ဝင်ကြည့်ပါ။
login ၀င်လို့ရသော်လည်း Menu မှာ “Windows” ဟု တစ်ခုတည်းသာပေါ်နေလျှင်
လိုအပ်က ရုံးချုပ်သို့ ဆက်သွယ်ပါရန်။
Login ၀င်ဝင်ခြင်းစတွေရမှာကတော့ အောက်ပါပုံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ စစခြင်း System သုံးမည့်သူများ Yangon Airways မှပေးထားသည့် Default Login Password ကိုမိမိနှစ်သက်ရာ Password ဖြင့်ချက်ခြင်း ပြောင်းလဲရန် / Password Change ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မိမိ Account မှာ မိမိ သာပိုင်သည့်အတွက် တစ်ခုခုတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်မိမိ Account ဖြင့် ဖြစ်ခဲ့လျင် မိမိသာတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါသည်။
Password change ရန် ဘယ်ဘက် အပေါ် တွင်ရှိသော ” W ” icon လေးကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် ” My Profile ” သို့ သွားပါ
Password ၏ ညာဘက်မှ ” Change ” ကိုနှိပ်ပါ
သင့် အရင် Password အဟောင်းကို “Old Password” တွင် ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
New Password နှင့် Confirm Password တွင် သင်ပြောင်းမည့် Password အသစ်ကိုရိုက်ပေးပါ
(မှတ်ချက်။ ။ Myanmar Font များဖြစ်မနေစေရန် ဂရုပြု ပါ )
System Admin ကိုယ်တိုင် Password အလုံးအရေအတွက်သာမြင်ရပါသည်။ မှားယွင်းပြောင်းလည်းမိခြင်း Password မေ့သွားခြင်းဖြစ်ပါက System Support (worldticket) ထံသို့ Email ဖြင့် အကြောင်းကြရသောကြောင့် အနည်းဆုံး နေ့တစ်ဝက် မှ အများဆုံး ၁ ရက်ကြာတတ်ပါသည်။
( Part I – The End – )
Published September 24, 2016 July 19, 2017
My Favorite Quotes Collections (English , Myanmar)